Google Analytics ဖြင့် WordPress စာရေးသူမှခြေရာခံခြင်း
တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 8, 2010 တနင်္ဂနွေ, Aprilပြီ 24, 2016 Douglas Karr
Google Analytics နဲ့ WordPress မှာစာရေးသူအများအပြားဘယ်လိုခြေရာခံရမလဲဆိုတာနောက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုငါရေးခဲ့ဖူးတယ် တစ်ခါကဒါပေမယ့်မှားတယ်လေ! WordPress Loop အပြင်ဘက်တွင်၊ သင်ရေးသားသူအမည်များကိုဖမ်းယူ။ မရပါ၊ ထို့ကြောင့် code သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။
ငါနောက်ထပ်တူးဖော်ခြင်းအချို့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းကို Google Analytics profiles များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ (အတော်လေးရိုးရိုးသားသားပြောရရင်မင်းဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုချစ်ဖို့လာတဲ့အချိန်ပဲ analytics packages များကဲ့သို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ!)
အဆင့် ၁ - လက်ရှိဒိုမိန်းသို့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ထည့်သွင်းပါ
ပထမအဆင့်မှာသင်၏လက်ရှိဒိုမိန်းတွင်ပရိုဖိုင်းတစ်ခုထပ်ပေါင်းထည့်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူအများစုနှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်မရှိသော်လည်းဤအခြေအနေမျိုးအတွက်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆင့် ၂ - စာရေးသူကိုယ်ရေးရာဇ ၀ င်ထဲသို့ထည့်သွင်းရန်ထည့်သွင်းခြင်းထည့်ပါ
သင်သည်ဤပရိုဖိုင်းရှိစာရေးဆရာများမှလိုက်နာသည့်စာမျက်နှာမြင်ကွင်းကိုသာတိုင်းတာရန်လိုအပ်သည်၊ ဒါကြောင့် subdirectory အတွက် filter တစ်ခုထည့်ပါ / စာရေးသူ /။ ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်စုတစ်ခုမှာ“ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအရာများ” ကိုအော်ပရေတာအဖြစ်ပြုလုပ်ရမည်။ ဂူဂဲလ်၏ညွှန်ကြားချက်များကဖိုင်တွဲမတိုင်မှီ ^ လိုအပ်သည်။ တကယ်တော့သင်သည်လယ်ထဲသို့ ^ ရေးလို့မရပါ။
အဆင့် ၃။ သင်၏မူလပရိုဖိုင်တွင်ဖယ်ထုတ်သည့်စစ်ထုတ်မှုကိုထည့်ပါ
သင့်မူလပရိုဖိုင်ရှိစာမျက်နှာအပိုမြင်ကွင်းအားလုံးကိုစာရေးသူမှအမှန်တကယ်ခြေရာခံချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် subdirectory ကိုဖယ်ထုတ်ရန်သင့်မူလပရိုဖိုင်ထဲကို filter တစ်ခုထည့်ပါ။ ရေးသားသူ /.
အဆင့် ၄ - Footer Script ထဲတွင် Loop ထည့်ပါ
သင်၏လက်ရှိ Google Analytics ခြေရာခံအတွင်းနှင့်လက်ရှိ trackPageView လိုင်းအောက်တွင်သင်၏အောက်ခြေကွင်းဆက်ဖိုင်တွဲတွင်အောက်ပါကွင်းဆက်ကိုထည့်ပါ။
၎င်းသည်သင်၏ဒိုမိန်းအတွက်ဒုတိယပရိုဖိုင်းတွင်သင်၏ရေးသားခြင်းအားလုံးကိုရေးသားသူမှဖမ်းယူလိမ့်မည်။ ဤခြေရာခံခြင်းကိုသင်၏အဓိကပရိုဖိုင်းမှဖယ်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်၊ မလိုအပ်သောစာမျက်နှာမြင်ကွင်းများထပ်ထည့်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင့်တွင်ပင်မစာမျက်နှာ (၆) ခုပါ ၀ င်သည့်ပင်မစာမျက်နှာတစ်ခုရှိပါက၊ ဤကုဒ်နှင့်အတူစာမျက်နှာ ၆ ခုကိုခြေရာခံလိမ့်မည် - ပို့စ်တစ်ခုစီအတွက်တစ်ခု၊ စာရေးသူမှခြေရာခံသည်။
ဒီနေရာမှာ Author Tracking ဘယ်လိုသက်ရောက်မလဲ။
သင်ဤအရာကိုအခြားနည်းဖြင့်သင်ပြီးမြောက်ပါကစာရေးသူ၏အချက်အလက်များကိုခြေရာခံရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းများကျွန်ုပ်ပွင့်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ Adsense ၀ င်ငွေသည်ပရိုဖိုင်းနှင့်ဆက်နွှယ်သောကြောင့်မည်သည့်စာရေးသူသည်ကြော်ငြာဝင်ငွေအများဆုံးရရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်ပင်တွေ့နိုင်သည်။
Tags: စာရေးသူစာရေးသူခြေရာခံanalytics google
8:2010 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 3, 16 တွင်
Doug ဂရိတ် post! ဤအဆင့်ရှိ Authors များကိုခြေရာခံရန်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ GA တွင်ဖြစ်ရပ်များကိုခြေရာခံခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏စာရေးသူရေးသားချက်တစ်ခုချင်းစီကိုသင်၏ပုံမှန်ဒေတာများနှင့်အတူတူညီသောစာမျက်နှာပေါ်တွင်ကြည့်ရှုခြင်းများကိုအကြိမ်မည်မျှကြည့်ရှုသည်ကိုကြည့်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဖြစ်ရပ်သတင်းပို့ခြင်းတွင်ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကိုသင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးမည်သည့်အရင်းအမြစ်များသည်စာရေးဆရာများကို visitors ည့်သည်များအားမောင်းနှင်နေသည် (ဥပမာ - တွစ်တာမှတစ်ဆင့်စာဖတ်သူအများဆုံးကိုမည်သူဆွဲဆောင်သည်) စသည်တို့ကိုကြည့်နိုင်သည်။ စသည်တို့ကိုငါရေးသားရန်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ ဇာတ်ကောင်ကန့်သတ်ကျော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ link ကိုဒီမှာ http://www.wheresitworking.com/2010/02/08/tracking-authors-in-wordpress-with-google-analytics-event-tracking/
10:2010 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 8, 50
Doug၊ မင်းကအချိန်ကာလမှန်မှန်ကန်ကန်တင်ထားပုံရတယ်၊ ငါဒါကို Indiana Insider ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာတင်မယ်။http://www.VisitIndiana.com/blog/ယနေ့
မတ်လ 6, 2010 မှာ 2: 19 AM
ဒီ Doug ကိုမျှဝေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စာရေးသူနာမည်ကိုပုံတူပွားခြင်းနှင့်နှစ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန် the_author () ကို get_the_author () ဖြင့်အစားထိုးရန်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။
27:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 7, 32
Doug၊ ကျွန်ုပ်ဤအရာကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အမှန်တကယ်ရေးသားသူစာမျက်နှာများ၏အမြင်များကိုသာခြေရာခံသည် (... / author / AUTHORNAME) မဟုတ်ဘဲ၊ ရေးသားထားသောစာမူတစ်ခုစီ၏အမြင်များကိုသာရေးသားသူမှခွဲခြားထားသည် - မည်သည့်အတွေးမျိုးမဆို?
27:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 7, 42
ငါအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တဲ့နည်းလမ်းကတကယ်တော့ Google Analytics (သီးခြား UA ကုဒ်များ) ထဲကနှစ်ခုကွဲပြားတဲ့အကောင့်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်။ ငါအကောင့်တစ်ခုကို“ စာရေးသူ” လို့ခေါ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးကိုသိမ်းထားတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ရှိရဲ့လား။
27:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 7, 46
အိုးနှစ်ခုလုံးသီးခြား UA ကုဒ်များလား။ ငါ UA ဘလော့ဂ်ကုဒ်အောက်မှာပရိုဖိုင်းအသစ်တစ်ခုထားလိုက်တယ်။ ဒါကိုကျွန်တော်ရိုက်မယ်၊ ဒါကငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာမင်းကိုပြောပြမယ်။
ဇွန် 25, 2012 မှာ 2: 15 pm တွင်
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အခုဒီဟာကိုကြိုးစားနေတယ်။ တခုခုက၊ ငါ "echo" ကို loop ထဲမှဖယ်ထုတ်လိုက်သည်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကစာရေးသူနာမည်ကိုပုံတူပွားနေသည်။ ဥပမာအားဖြင့် / by-author / Author NameAuthor Name ပဲ့တင်သံနှင့်အတူပေါ်လာခဲ့သည်။
12:2014 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 23
သင်ခန်းစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စာရေးသူတစ် ဦး ချင်းစီသည်သတင်းဘလော့ဂ်တွင်စုဆောင်းထားသောစာမျက်နှာများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်ပေးချေရန်ကျွန်ုပ်ခြေရာခံရန်လိုအပ်သည်။
ပင်မစာမျက်နှာအပါအ ၀ င်တကယ်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး
မူလစာမျက်နှာမှကုဒ်ကိုသင်ဖယ်ထုတ်နိုင်ပါသလား။ အကယ်၍ ထိုကုဒ်ကိုစာမျက်နှာတစ်ခုတည်း (သာမာန်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများပေါ်ရှိရွေးစရာတစ်ခု) ထဲ၌သာထည့်ပါက၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ရေတွက်ရာမှ homepage အမြင်များကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း?
12:2014 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 49
ကျနော်တို့တကယ်သုံးပြီးပါတယ် မင်္ဂလာပါ အဲဒါအတွက်အတော်လေးကောင်းပါတယ်။
မေလ 16, 2015 မှာ 8: 54 pm တွင်
အဆင့် ၁ ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ “ သင်၏လက်ရှိဒိုမိန်းတွင်ပရိုဖိုင်းတစ်ခုထပ်ထည့်ပါ”
မေလ 17, 2015 မှာ 9: 28 pm တွင်
သူတို့ကသူတို့ Justin ကိုရန်, ကလွယ်ကူအောင်မပေးပါဘူး? ဒီမှာခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပါ Google Analytics စာမျက်နှာ။